बैंक र वित्तिय संस्थामा कोरोना कहरः ठूलो डिपोजिटकर्ताहरुको फोन बैंकका सीइओले उठाउन छोडे ? - Aathikbazarnews.com बैंक र वित्तिय संस्थामा कोरोना कहरः ठूलो डिपोजिटकर्ताहरुको फोन बैंकका सीइओले उठाउन छोडे ? -
creative writing for entertainment full sail tree roots creative writing can you write thesis statement order management system case study can someone else write my thesis sfsu creative writing dept hero's journey creative writing who helps you with your homework ne demek primary homework help victorians cover letter for pipefitter helper royal holloway english literature and creative writing fashion writer cover letter traduction de do your homework en anglais can i write in this essay online thesis helper hire someone to do my homework essay papers for sale i need help writingaliterature review professional dissertation writing services job opportunities after creative writing university of hawaii creative writing phd homework help sites like chegg essay on diwali written in english creative writing at ucla help writing personal statement what to write my common app essay about change of perspective creative writing i need help writing my business plan how can we help others essay kitchen creative writing
नेपालका बैंक र वित्तिय संस्थाहरुमा कोरोना कहरका कारण कर्जा लगानी नभएपछि तरलता (पैसा) फालाफाल छ भन्दा फरक पर्दैन । विगत वर्षहरुमा ठूला डिपोजिट लिन बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारी नै पठाएर कर्जाको व्याजको मोलमोलाई गर्दै ठूलो डिपोजिट भित्र्याउने परम्परा थियो । तर, अहिले भनिन्छ ठूला डिपोजिटकर्ताहरुको टेलिफोन नै सीइओ साबहरुले उठाउदैनन् रे ।
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने कहिले सासुको पालो कहिले बुहारीको पालो भन्ने नेपाली उखान अहिले बैंकहरुमा लागु भएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
ठूला कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल टेलिकम, एनसीएल र विभिन्न जीवन र निजीवन बीमा कम्पनीहरुले बैंकका सीइओ साबहरुलाई ठूलो डिपोजिट लिन चाकरी नै गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
ठूला डिपोजिट संस्थाहरु संस्थागत निक्षेपकर्ता र बैंकका सीइओ बीच अहिले अवस्था फेरिएको छ भन्दा फरक नपर्ला कुरा हो संस्थागत डिपोजिटको । करिब १ वर्ष अगाडी संस्थागत (ठूलो संस्थाको) डिपोजिट लिन बैंकहरुले संस्थाका प्रमुखलाई खुशी बनाउनु पर्ने, विदेश भ्रमण गराउनु पर्ने, महंगो ब्याज दिनुपर्ने, बाध्यता थियो । तर, आज परिस्थिति ठिक उल्टो भएको छ भन्दा पत्याउन गाह्रो होला । तर, यो सत्य हो ।
कोरोना कहर बीच वाणिज्य बैंकहरुले ब्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्ता भनेर छुटा छुट्टै व्याजदर कायम गरेको छ । बैंकहरुमा चर्को तरलता भएका कारण अहिले बैंकहरुले ठूला संस्थाका डिपोजिट लिन सक्ने अवस्था देखिदैन । भनिन्छ सरकारी संस्थागत डिपोजिटकर्ताहरुले बैंकमा पैसा राख्न टेण्डर नै आव्हान गर्नु पर्ने वाध्यता छ । जुन बैंकले बढि ब्याज दिन्छ त्यही बैंकमा पैसा राख्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । तर, कोरोना कहर बीच बैंकहरुले पैसा लिन मानेको अवस्था देखिदैन भन्दा फरक पर्दैन ।
कोभिडका कारण बैंकहरुसँग ऋणको माग भएन । दशैंतिहारमा अलिअलि ऋण गए पनि पहिलेजस्तो माग भएन । यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा २०० अर्ब हाराहारी तरलता थुप्रिएको छ । तरलता बढ्दा बैंकहरुको ब्याज खर्च बढ्छ । त्यसैले पनि उनीहरुले ठूला संस्थाका संस्थागत निक्षेपकर्तलाई वास्ता नगरेका भनिन्छ ।
अहिले सरकारी ठूला डिपोजिटकर्ता यी संस्थाहरुको पैसा धमाधम परिपक्व भइरहेको छ भने कतिपय नयाँ कोषहरु पनि थपिएका छन् । तर उनीहरुको पैसा लिन अहिले बैंकहरुले प्रस्ताव गर्न छाडेका छन् । प्रस्ताव नगरेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ता अहिले सिइओ र माथिल्लो ब्यवस्थापनकामा धाउनुपर्ने दिन आएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
निजी क्षेत्रकै बीमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीलगायतको पैसा पनि बैंकले लिन छाडेका छन् । उनीहरुको पुरानो पैसा नवीकरण गर्दा १० पैसा बढी ब्याज पाउँछन्, तर बैंकले नवीकरण गर्ने इच्छा नै देखाएका छैनन् । नयाँ पैसाका लागि पनि बैंकले चासो देखाएका छैनन् भन्दा फरक पर्दैन ।
करिब १ वर्षमा फरकपन फैलदो कोभिड र त्यसले आर्थिक रूपमा पु¥याएको क्षतिले गर्दा भएको हो । कोभिडका कारण बैंकहरुसँग ऋणको माग भएन । दशैंतिहारमा अलिअलि ऋण गए पनि पहिलेजस्तो माग भएन । यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा २०० अर्ब हाराहारी तरलता थुप्रिएको छ । तरलता बढ्दा बैंकहरुको ब्याज खर्च बढ्छ । त्यसैले पनि उनीहरुले ठूला संस्थाका संस्थागत निक्षेपकर्तलाई वास्ता नगरेका भनिन्छ ।
यस अवधिमा रेमिटेन्स वृद्धिमा कुनै कमी आएको छैन । शोधनान्तर बचत उच्च भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाउन अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) कटौती ग¥यो भने कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा पनि केही लचकता अपनायो । पुँजीको थप साढे २ प्रतिशत (काउन्टर साइक्लिकल) बफर राख्नुपर्ने ब्यवस्थालाई पछाडि सा¥यो । यसबाहेक सरकारी खर्चले प्रणालीमा पैसा थुप्रियो भन्न सकिन्छ ।
यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । उच्च तरलताका कारण बैंकहरुलाई अहिले निक्षेप आवश्यक छैन । निक्षेप लिनु भनेको खर्च बढाउनु हो । त्यसैले बैंकले पैसा लिन छाडेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ता बैंकका सीइओ र उच्च ब्यवस्थापनकहाँ धाउन थालेको देखिन्छ ।
बचतको न्यूनतम सीमाको ५० प्रतिशत मात्र ब्याज दिन पाइन्छ । अहिले बचतको न्यूनतम ब्याज डेढ प्रतिशतमा आइसकेको छ । यस हिसाबले कल डिपोजिटको ब्याज ०.७५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यी र यस्ता कारणले अहिले शेयर बजारले फड्को मारेको छ भन्दा फरक पर्दैन । जब बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने गर्दछ । तब शेयर बजार बढ्ने परम्परा यसपटक पनि भयो ।
बैंकरको अहिलेको क्रियाकलापप्रति बीमा कम्पनीहरु पनि खुसी छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । यसले जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानीलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ ।
बैंकर किशोर महर्जनले पंक्तिकारलाई भनेः– ब्याज दरमा यो हदसम्मको उतारचढाव ठीक होइन । तर, उनीहरुले दिने तर्क एउटै छ( ऋणको माग नभएर तरलता बढेपछि ब्याज घट्नु स्वभाविक हो । उनीले भने ब्याजदर अझ घट्ने छ । खासगरी ५० अर्बको सरकारी सहुलियत ऋण, २०० अर्ब हाराहारी राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमै पाइन्छ । यसले गर्दा बैंकहरुले आफ्नो ऋण दिनका लागि आधार दर अझ घटाउनु पर्छ । यसले गर्दा निक्षेपको ब्याज अझ घट्छ नि ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तले विगतमा धेरै नै मोलमोलाई गरे भनेर कल डिपोजिटको ब्याज दर नै तोकिदिएको छ । बचतको न्यूनतम सीमाको ५० प्रतिशत मात्र ब्याज दिन पाइन्छ । अहिले बचतको न्यूनतम ब्याज डेढ प्रतिशतमा आइसकेको छ । यस हिसाबले कल डिपोजिटको ब्याज ०.७५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यी र यस्ता कारणले अहिले शेयर बजारले फड्को मारेको छ भन्दा फरक पर्दैन । जब बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने गर्दछ । तब शेयर बजार बढ्ने परम्परा यसपटक पनि भयो ।
नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुले कुनै जनानामा संस्थागत डिपोजिटकर्ता, ठूला डिपोजिटकर्ता, ठूला सरकारी संस्थाका डिपोजिट लिन अर्थमन्त्री देखि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई भनिदिन आग्रह गर्थे तर, आज पैसा राख्न भनी दिने दिन आए भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
माछापुच्छ्रे बैंक कर्पोरेट सुपर सिक्सेस, माछापुच्छ्रे बैंक प्री क्वाटर फाइनल
सिटिजन्सको एकैदिन काठमाडौंमा दुई शाखा